Misaotra Trey Pennington | Martech Zone
Alahady, Septambra 4, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Vaovao manaitra sasany androany maraina, naheno ny fahafatesan'ny tsy nampoizin'i Trey Pennington. Tamin'ny volana martsa dia nangataka ahy ho eo amin'ny seho onjam-peo i Trey sy i Jay, Misokatra ho an'ny orinasa. Resaka nahafinaritra momba ny lazan'ny fitorahana bilaogy hatrany izany ary tena nanome ahy ny sain'ny Trey nandritra ny seho manontolo i Trey. Raha mamaky ny rindriny Facebook ianao, dia ho hitanao fa fahita matetika ny tsy fitiavan-tena nandritra ireo hafatra navelan'ny mpanaraka sy ny namany.
Tsy haiko ny pitsopitsony rehetra fa toa nibata ny ainy i Trey. Tena manaitra azy izany. Ny sasany amin'ireo tambajotran'i Trey dia manentana ny olona hangataka fanampiana raha manana eritreritra ny hamono tena izy ireo. Mazava ho azy fa hamporisika izany koa aho.
Misy fiahiahy hafa ho ahy koa. Mahagaga ny persona an-tserasera an'i Trey. Nandehandeha matetika izy ary nifandray tanteraka tamin'ny tamba-jotra. Ny pejiny twitter dia onjam-bitsika tsy misy farany mamporisika, misaotra ary manandratra ny hafa. Ny ahiahy ho ahy dia ity tambajotran'ny olona tsy mampino ity tsy ampy. Na dia mangarahara toa antsika aza isika dia mbola mampivelatra personas amin'ny Internet izay tsy mifanaraka amin'ny fanamby ivelan'ny Internet.
Mitroka izao ny toe-karena. Misy ny olona milaza fa tsy miraharaha izany ary manohy manohy fotsiny… fa manana olana lehibe amin'ny fananako aho. Amin'ny fotoana ahitan'ny masoivohom-pahombiazana fahombiazana mitohy, mbola fanamby hatrany isika. Raha tokony hametraka 100% ho an'ny mpanjifantsika izahay dia mahita fa mametraka 150% ho azy ireo… ary tsy ampy izany indraindray - mitohy hatrany ny fitakiana. Na dia miasa mafy kokoa aza izahay ary mitombo ny mpanjifanay dia manana olana misy fiatraikany amin'ny volan'ny vola… ary izany dia zavatra izay misy fiantraikany eo amintsika hatrany hatrany hatrany.
To Win amin'ity indostria ity dia mila mitombo ianao. Mba hitomboana dia mila mirotsaka an-tsehatra ianao ary mifampandroso tsy tapaka. Rehefa mihalehibe ny tamba-jotra dia mitombo koa ny fanantenana. Ny kabary rehetra omenao dia tokony ho tsara kokoa noho ny farany. Ny boky rehetra soratanao dia tokony ho mpivarotra be indrindra. Ny lahatsoratra bilaogy rehetra dia tsy maintsy mandeha viral. Isaky ny mifandraika aminao ny olona iray dia mila mifandray amin'izy ireo ianao ho setrin'izany… na raha tsy izany dia hita ho mpihatsaravelatsihy na karazana elitista ianao. Ny tena izy dia, goavana be ny fitakiana apetraka amin'ireo matihanina amin'ity orinasa ity.
Mamaky bebe kokoa momba ny sasany amin'ireo mpitarika ny indostrian'ny haino aman-jery sosialy manapaka ny tenany aho, manakarama mpiasa hametraka eo anelanelan'izy ireo sy ny tambajotran'izy ireo ary hametraka hatrany ny fangatahana amin'ny alàlan'ny fanamarihana tsy misy. Miomehy amiko ny namako fa tsy afaka miantso ahy na mahazo mihazona ahy. Ny sasany amin'ireo tsy dia mahatakatra loatra ny olona dia mamela ahy ho diso fanantenana, avy eo bitsiho aho, avy eo mifandraisa amiko amin'ny Facebook… dia tezitra ianao fa tsy mamaly.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, navelako hovitrovitra ny findaiko ary nihozongozona tsy misy fiatoana amin'ny antso vaovao isaky ny minitra vitsy. Novonoiko ihany io tamin'ny farany (toy ny fanaoko matetika). Na dia niasa aza aho isaky ny faran'ny herinandro, izao dia manokana fotoana ho an'ny namana sy fianakaviana - na inona na inona enta-mavesatra na hafatra tsy voavaly. Tsy afaka manohy ny asa aman-draharaha aho, manatanteraka ny asa, mivarotra ny orinasako ARY mamaly ny fangatahana rehetra avy amin'ny tambajotra misy ahy. Rehefa mila fotoana aho dia mihalavitra ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra amiko.
Tsy mimenomenona aho. Ity no tontolo nofidiako hampiasa sy hiasa ao anatiny, ary tiako izy izany. Mangataka fotsiny aho aminareo izay mahazo tombony amin'ny asa ataon'ireo matihanina amin'ny Internet mba handray minitra iray, misaotra azy ireo… ary fantaro fa manao izay tsara indrindra vitantsika izahay.
Trey Pennington dia nanana inefatra ity manaraka ity ananako. Tsy azoko an-tsaina ny fitakiana natao taminy. Nanantena izahay fa hampiditra an'i Trey tsy ho ela ao amin'ny fandaharana amin'ny radio ho fisaorana noho ny fanohanany ahy… Miala tsiny fa tsy hahazo izany fotoana izany izahay. Saingy misaotra an'i Trey aho noho ny fotoana nomeny ahy hifandray tamin'ny tambajotran-tserasera. Izany no karazana lehilahy taloha. Ary feno fankasitrahana aho noho ny fotoana niarahanay tamin'ny Internet.
Sep 4, 2011 ao amin'ny 10: PM PM
Mifofofofo. Namaly ireo sioka izy vao 7 ora lasa izay. Marina tokoa, tazomy amin'ny fomba fijery ny soatoavina ary aza misalasala mitady fanampiana rehefa ilaina izany.
Tsara hoy, spragued.
Herintaona latsaka izay dia namoy namana malala iray ny fiangonantsika noho ny famonoan-tena. Nanaitra ny saina ary nitovy ihany ny fanontaniana napetrak'ireo natsanganao tamin'ny toeranao ary tsy maintsy nikarakara fotoan-kevitra momba ny alahelo izahay hamaliana ireo fanontaniana sarotra momba ny famonoan-tena sy ny fahaketrahana. Nahafantatra zavatra betsaka tamin'ity tranga ity aho. Ny fahenoana ny fahafatesan'i Trey Pennington dia namerina fahatsapana fihetseham-po sy fanontaniana mangirifiry, fa ankehitriny dia milamina kokoa aho noho ny fahalavoana taloha.
Izay lazainao momba ny fanerena sy ny fitakiana dia azo antoka fa teboka tsara. Mila miala sasatra ny fanahin'ny olombelona ary tsy mahazaka fanaintainana be loatra.
Ny saiko sy fiononako dia mankany amin'ny fianakavian'i Trey sy ny namany. Enga anie ny lova-taniny ho fitahiana foana ary samy hahita fiononana tsy ho ela raha azo atao.
Sep 5, 2011 amin'ny 4: 30 AM
Namoy namana hafa toy izao aho, roa taona lasa izay ary antso fanairana izany. Izy io koa dia nahatonga ahy hieritreritra tamin'ireny andro ireny sy raha nisy fiatraikany teo amin'ny fitondran-tenako. Azoko antoka fa ny lova navelan'i Trey dia hanjary loharanom-tsindrimandry tsy mampino. Izaho koa dia mivavaka ho an'ny fianakaviany sy ny namany mandritra izao fotoana mahatsiravina izao.
Sep 4, 2011 ao amin'ny 11: PM PM
Vao nahalala momba an'i Trey aho androany maraina tamin'ny alàlan'ny sioka avy amin'ny fiarahamonina media sosialy DC. Tena mampalahelo. Ny fahafatesany dia nanasongadinana fa ny olona ao anatin'ny fanaintainana faran'izay mafy dia matetika no manalavitra ny fifantohana amin'ny tenany, raha toa ka mampifaly ny hafa foana izy, araka ny asehonao eto (sy izay novakiako tany an-toeran-kafa.) Miteny toy ny marary lava fahaketrahana aho. Mora lavitra kokoa ny manampy olon-kafa noho ny mangataka fanampiana. Fomba tsara (ary tena misy dikany!) Ny fahatsapana na hiseho ho matanjaka kokoa aza. Ary miaina amin'ny kolotsaina mandroso haingana isika izay tsy mamela antsika hanana fotoana na hery hanatratra izany, na mifandray tahaka antsika aza.
Tsapako ho an'ireo namany sy fianakaviany ary ho azy. Ny olona iray dia tsy maintsy mijaly amin'ny alahelo tsy takatry ny saina mba hisafidy ny hamarana ny fiainany. Manantena aho fa ny hafa izay manana olana mitovy amin'izany dia hahazo aingam-panahy hanolo-tanana.
Sep 5, 2011 amin'ny 4: 34 AM
Ny famoizam-po dia mpamono olona mamitaka, Laurie. Tena marina ny momba ny fanampiana. Raha ny marina dia lazaiko fa indraindray ny fifaliana amin'ny fanampiana ny hafa matetika dia manampy amin'ny fanilihana ilay tebiteby iainan'ny hafa. Raha misy mamaky ireo fanehoan-kevitra ireo ary sahirana dia manantena aho fa handeha hanampy. Tsy misy fanantenana intsony… afaka mahazo fanampiana isika ary afaka mahita fifaliana indray.
Sep 5, 2011 amin'ny 1: 47 AM
Lahatsoratra tsara Douglas. Misy teboka 2 nolazainao fa mampiahiahy ahy:
1) “Na dia mangarahara toa antsika aza isika dia mbola mampivelatra personas amin'ny Internet izay tsy mifanaraka amin'ny fanamby ivelan'ny Internet.” <= Marina sy meloka tokoa araka ny voampanga. Ny mampihomehy dia na dia manao an'io aza aho dia hadinoko fa ny hafa koa mety. Ka rehefa mijery amin'ny Facebook ianao ary mahita ny fanavaozana ny toe-javatra avy amin'ny namanao momba ny fahombiazana rehetra iainan'izy ireo, ny 'fahafinaretana' ananan'izy ireo, vao mainka aho kivy sy mankaleo, lol.
2) "Ny namako dia manao vazivazy amiko ny amin'ny tsy fahafahany miantso ahy na mahazo mihazona ahy." <= Tonga saina aho tamin'io. Na dia rehefa mamaly ny fangatahana avy amin'ny tambajotrao aza. Ny marina dia ny firesahana amin'ny namana mandritra ny andro fiasana sy ny famaliana ny fanontaniany sasany dia tsy hetsika fitadiavam-bola. Ary rehefa tonga eo io dia tena mila miambina ny fotoanao ianao ary eny, manakarama mpiandry vavahady hiatrehana sy hanavahana ireo fanontaniana izay mila ny sainao avy hatrany sy ireo izay tsy. Nihazona tsimoramora ny antso inbound tato ho ato aho ary toa henjana izany saingy zavatra tsy maintsy ataoko, ho solopreneur hanamafisana ny fotoako ary hitondrako mody ny bacon.
Miala tsiny tokoa raha maheno momba an'i Trey Pennington. Tsy zatra ny asany. Avy amin'ireo bitsika rehetra novakiako dia toa lehilahy mahafinaritra izy izay nandray anjara betsaka tamin'ny media sosialy sy ny indostrian'ny marketing.
Sep 5, 2011 amin'ny 4: 27 AM
Hevitra tsara toy izany ry Stephanie. Mampanontany tena ahy ny hasarobidin'ireo tambajotra ireo indraindray. 🙂 Faly aho fa ahy ianao! Aza misalasala manantona rehefa mila maka ahy ianao!
Sep 5, 2011 ao amin'ny 2: PM PM
Lahatsoratra tena tsapa fo sy mahaliana izay tena miresaka amiko. Amin'ny maha olona nanomboka ny sampan-draharahany manokana taorian'ny fatiantoka ny mpampiasa ahy taloha (amin'ny fanaovan-trano) sy ny masoivoho teo aloha, fantatro ireo fanerena ireo.
Imbetsaka aho no nitolona tamin'ny tenako mba hanandramako hanome ny tenako ny fanamarinana haka andro tsy fiasana iray; hiasa latsaky ny 13 ora isan'andro, handoavana ny entana faha-50 "maimaimpoana" izay nangatahan'ny mpanjifa ary hampitombo ny orinasantsika. Izahay dia nitombo tamin'ny resan'ny resa-be ary manana mpanjifa mahafinaritra, kanefa, ny fitakiana dia mitovy amin'ny nanoratanao azy ireo.
Douglas dia namana iray nahafinaritra izy. Roa vahiny vahiny lehibe nananako azy tamin'ny taon-dasa, tsara fanahy be izy ary io no fandaharana mivantana mivantana voalohany nataoko ary tsapako fa niantsoantso fotsiny aho mba handrenesako ny tenako.
Manaiky aho fa ny valin'ny fanantenan'ny olona dia mila miantso an-telefaona.
Raha ny filazan'ny olona milaza fa ny olona an-tserasera tsy mifanaraka amin'ny tsipika ivelany dia tsy ekeko. I Trey koa dia ny fanomezana olona manokana. Izahay olon-tsotra / olona tsy vonona hametraka ny fiainantsika manokana amin'ny Internet. Fa maninona isika no tsy raharahan'olona?
Ka inona no tianao ampizarinay amin'ny serasera sosialinay?
Ny safidiko ho raisina amin'ity dia ny “Ahoana no hiarahako amin'ny an'ny hafa noho ny fifandraisako amin'i Trey?”
Mbola ho mpanentana sy mpanampy foana aho ary hanohy hanana tambajotra matoky manokana mandritra ny fotoana ilako hivoahana.
Ny fitiavako sy ny vavako dia mivoaka amin'ireo zanak'i Trey satria fantatro fa nandrava izany rehefa nisara-panambadiana ny ray aman-dreniko taorian'ny fanambadiana 25 taona, azoko an-tsaina fotsiny ny mampanaintaina ny famonoan-tena iray noho ny fisaraham-panambadiana.
Misaotra tamin'ny teny soa, Michele. Manaiky aho fa tsy tiako ho fantatry ny olona ny orinasako manokana. Etsy ankilany, na izany aza, ny mpanaraka dia mila mahafantatra rehefa manana ireo fanamby mitovy (an'ny daholobe sy ny tsy miankina) ireo izay arahiny. Tsy misy izany antsoina hoe superman na superwoman ary heveriko fa mila miverina miantso ireo olona tonga lafatra ireo isika - raha tsy izany dia mandainga amin'ny tenantsika momba ny mangarahara fotsiny isika, sa tsy izany?
Ny naman'i Trey sy ny fianakaviany dia ao am-bavaka - loza mahatsiravina sy mahatsiravina izany.
Sep 5, 2011 ao amin'ny 7: PM PM
Hevitra tsara Doug! Manana tolona mitovy amin'izany aho. Nolazaina foana aho fa mila manao bebe kokoa amin'ny Internet, saingy sahirana aho mandritra ny andro maro vao manatanteraka ny asan'ny mpanjifako. Miezaha araka ny azontsika atao, tsy misy olona tonga lafatra ka na aiza na aiza no ahamiraranao amin'ny toerana iray, dia mety hisy lesoka amin'ny hafa ianao. Mampalahelo tokoa ny nanjo an'i Trey. Ny fiainam-pianakavianay manokana dia manan-danja kokoa noho ny tambajotranay efa ela, ary rehefa mihozongozona ny fototra dia mety hahatsapa ho toy ny hoe hirodana daholo izy rehetra. Tso-drano ho anao! Ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'i Trey sy ny namany rehetra.